Garoonka diyaaradaha Jowhar oo loo bixiyay Mohamed Dheere International Airport – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Allhadaaftimo March 31, 2020 Uncategorized
Munaasabad loogu magac darayay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar guddoomiyihii hore ee gobolka Sh/dhexe Maxamed Cumar Xabeeb “Maxamed Dheere” ayna ka soo qeybgaleen Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo uu garabkiisa taagan yahay Madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa si wadajir ah xariga ugaga jaray magac bedelida garoonka oo hore loo oran jirey Jowhar Airport balse hadda loo bixiyay Mohamed Dheere Interntaional Airport.
Sidoo kale munaasbadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas’uuliyiin isugu jirtey heer wasiir,xildhibaano madax ka socotay maamulka gobolka Sh/dhexe iyo kan degmada Jowhar.
Intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa mas’uuliyiintii ka hadashay ay dhammaantood qireen in Allaha u naxariistee Maxamed Cumar Xabeeb uu ahaa halyey Soomaaliyeed oo bulshadiisa waxbadan u qabtay uuna mudan yahay in loogu magac daro goobo muhiim ah sida garoonka diyaaradaha.
Allaha u naxariistee Maxamed Dheere ayaa intii uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sh/dhexe waxa uu ka soo dejiyay garoonka maanta loogu waqlalay dowladii kumeelgaarka ahayd ee lagu soo dhisay dalka Kenya sanadkii 2005tii.
Previous Khasaaraha Uu Sababay Dagaal Laba Beelood Ku Dhex Maray Galbeedka Kismaayo
Next Somaliland oo lagga hellay 2 qof oo qaba cudurka Corona Virous